ब्यालेन्स पानामा भविष्यको अवधिको व्यय यस रिपोर्टिङ अवधिमा खर्च भएको लागतमा जानकारी संक्षेप गर्न इरादा हो , तर आगामी अवधिमा सम्बन्धित। यस्तो परिभाषा वित्तीय बयान को रखरखाव मा र खाता को चार्ट को उपयोग को लागि निर्देश मा विनियम मा दिइएको छ।
भविष्य खर्चको लागि लेखांकन प्रतिनिधित्व गर्दछ, यसरी, पहिले नै प्रतिबद्ध खर्चको वितरणको विधि। एकै समयमा, यी लागतहरूको वर्गले सम्पत्तिको सेवानिवृत्ति, अग्रिम वा पूर्व भुक्तानी सम्बन्धी सम्बन्धहरूसँग सम्बन्धित गर्दैन।
जब बयान तयार गर्दै, यो आवश्यक पर्दछ कि सर्तहरू भविष्यको व्यतीत पहिचानको लागी खातामा लिनु आवश्यक छ। विशेष गरी, लागत नियामक वा विधायी कार्यहरु, अनुबंध, व्यापार कारोबार को परंपराहरु को एक विशिष्ट आवश्यकता अनुसार अनुसार गरिन्छ। एक शर्त को लागत को निर्धारित गर्न को संभावना हो। भविष्यको अवधीहरूको व्यहोरा यस्तो रूपमा मान्यता दिइन्छ, यदि एक निश्चित कुरा हो कि एक विशेष अपरेसनको परिणाम उद्यमको आर्थिक लाभमा कमी हुनेछ।
खाताको योजनालाई निर्देशन अनुसार, उनीहरूको आर्थिक सामग्री अनुसार, लागत दुई कोटिमा विभाजित हुन्छ। पहिलो को लागि तैयारी प्रकृति को भविष्य को समय को लागत ले। तिनीहरू भविष्यमा अपेक्षित अनुमानहरूसँग जोडिएको छ। यस्ता खर्चहरू, विशेष गरी नयाँ उत्पादन प्रविधिहरू, खनन तयारी, मौसमी कामका लागि तयारी र यति महँगो समावेश गर्दछ। दोस्रो श्रेणीमा हालको अवधिको लागत समावेश छ। यो समुह, विशेष गरी, महंगा उत्पादन उपकरण को मरम्मत को लागि लागत शामिल छ। यस्तो लागतको लागि, धेरै प्रासंगिक लागत को एक महत्वाकांक्षा वितरण को प्रयोग गरेर प्रासंगिक लेख को तहत प्रतिबिंब को "असहज बाहिर" को तुलना मा अधिक नहीं माना जाता।
यो ध्यान दिनु पर्छ कि नियमहरूले व्यय वा आवधिक खर्चहरू व्यहोर्दैनन्। यी समावेशका लागि, उदाहरणको लागि गतिविधिको प्रकार लाइसेन्स, बीमा भुक्तानी, एक निश्चित अवधिको लागि हस्तान्तरण सफ्टवेयर प्रयोग गर्न अधिकार खरीद गर्न। भाडा भुक्तानीको लागि अग्रिम कागजात कागजातमा निर्दिष्ट गरिएको छैन।
आगामी आय संग जोडिएको भावी अवधिहरूको खर्च दुई समूहमा विभाजित छ। पहिलोमा, लागतहरू प्रत्यक्ष रूपमा भविष्यमा लाभबाट सम्बन्धित छन् । विशेष गरी, ती उत्पादन आवश्यकताहरु को लागि तैयारी लागत शामिल छ। दोस्रो श्रेणीमा आय अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा खर्च समावेश गर्दछ।
लागतहरू रिपोर्टिङ कागजात हानि र मुनाफामा मान्यता प्राप्त, प्राप्त र उत्पादन लागतहरू (लागत र मुनाफा अनुपात) को अनुसार सम्बन्धमा लिईरहेको छ। यसबाट यो पछ्याउँछ कि आगामी समयको व्यय व्यहोरा लाभ को सीधा लागत को श्रेय दिइन्छ। यो मुनाफा वा भविष्यमा आउनेछ।
यसको अलावा, लागत रिपोर्टिंग अवधि को बीच उचित रूपमा आवंटित गर्न सकिन्छ। यो सम्भव छ कि लागत धेरै अवधि को लागि लाभ को कारण छ, या यदि लागत र राजस्व को बीच सम्बन्ध स्पष्ट रूप देखि परिभाषित या अप्रत्यक्ष स्थापना गर्न सकिँदैन।
यसबाट निम्नानुसार निम्न आगामी लाभ संग सम्बद्ध लागत रेकर्डिङ गर्ने तरिका (अप्रत्यक्ष रूपमा) खाता एकाउन्टको व्यावसायिक व्यक्तिगत रायमा निर्भर हुनेछ। यी लागतहरू वितरित गर्न सकिन्छ, तर मात्र यदि भविष्यको मुनाफाको प्राप्तिसँग उनीहरूको जडानको लागि कमान्डर औचित्यहरू छन्। यदि कुनै पनि औचित्य छैन भने, त्यसपछि वितरण लागत वर्तमान अवधिमा वितरणको रूपमा वितरणको रूपमा विचार गरिनुपर्दछ।
निश्चित सम्पत्तिहरूको रसिदको लागि लेखा
अग्रिम रिपोर्ट कसरी सही तरिकाले आकर्षित गर्ने हो? नमूना र नियमहरू
Severance विलम्ब भुक्तानी
के शब्द "सिङ" गर्छ?
Alder: वर्णन, चिकित्सा आवेदन
जुन 27 मा जन्मे: राशिको चिन्ह - क्यान्सर
रेस्टुरेन्ट खाद्य पार्क: एक रेस्टुरेन्ट मा पार्क वा पार्क मा रेस्टुरेन्ट?
TNL - जेल lacquers बजेट श्रेणी
रोलिंग मिल: इतिहास र आधुनिक वर्गीकरण